Wariyaha Al Jazeera Xamsa Maxamed oo lagu xiray Muqdisho - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaWariyaha Al Jazeera Xamsa Maxamed oo lagu xiray Muqdisho
October 19, 2016 Puntland Mirror Somalia 0
Wariyaha Al Jazeera Xamsa Maxamed. [Sawirka: snapshot]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ciidamada amaanka dowlada Soomaaliya ayaa maanta oo Arbaco ah ku xiray magaalada Muqdisho wariyaha Al Jazeera Xamse Maxamed iyo saaxiibadiis oo ay kamidyihiin sawir-qaade, martigeliye iyo darawal.
Kooxda ayaa la xiray iyaga oo kasoo noqday magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe kuna sii jeeday caasimada Soomaaliya ee Muqdisho, sida ay ilo-wareedyada sheegeen.
Ma jirto jawaab katimid ciidamada amaanka Soomaaliya oo ku saabsan xiritaanka wariyaha Al Jazeera iyo saaxiibadiis.
Asbuucii hore, ciidamada amaanka Soomaaliya ayaa Muqdisho ku xiray wargeyska Xog-ogaal iyo tifaftirihiisii, laakiin dib ayaa laga sii daayay xukun la’aan.
October 20, 2016 Waiyaha Al Jazeera Xamsa Maxamed oo laga sii daayay xabsi kuyaala Muqdisho